Fanafihana fampihorohoroana any Oslo: Polisy naratra, mpanafika mitam-piadiana maty
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Vaovao Mafana Norvezy » Fanafihana fampihorohoroana any Oslo: Polisy naratra, mpanafika mitam-piadiana maty
Vaovao Mafana Eoropeana • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Crime • Vaovaom-panjakana • Vaovao • Vaovao Mafana Norvezy • People • Safety • Tourism • Travel Wire News • malaza ankehitriny
Fanafihana antsy tao Oslo: Polisy naratra, mpanafika maty.
Tsy mbola fantatra izay anton’ity voarohirohy ity, na dia araka ny filazan’ireo nanatri-maso aza dia niantsoantso “Allahu Akbar” (lehibe Andriamanitra) nandritra ny fanafihana ilay lehilahy.
Lehilahy tsy mitafy akanjo no nanafika ny mponin'i Oslo tamin'ny antsy lehibe sady nihiaka hoe “Allahu Akbar”.
Nifanditra tamin’ny polisy tao anaty fiara ilay mpanafika ary notifirin’ny polisy iray hafa.
Voalaza fa tonga tany Norvezy avy any amin'ny faritra atsimon'i Rosia ao Chechnya ny mpanafika adala.
Oslo Naratra ny polisy rehefa nanafika ny mponina tao an-drenivohitr'i Norvezy tamin'ny andro antoandro ny lehilahy iray tsy nanao lobaka, nanondro antsy lehibe, talohan'ny notifirin'ny mpitandro ny filaminana sy ny fahafatesany.
Ny sary sy sary nozaraina an-tserasera dia mampiseho fiaran'ny mpitandro filaminana nidona tamin'ny lehilahy iray tsy nanao lobaka tao an-drenivohitra Norvezy raha nanondro antsy izy ary voalaza fa nandrahona ny mpandalo.
Taorian’ny nazeran’ny fiaran’ny polisy nihemotra, dia tafarina indray ilay jiolahy ka nanokatra ny varavaran’ny mpandeha tamin’ilay fiaran’ny polisy. Tamin’izay indrindra no nisehoan’ny fifandonana tamin’ny manamboninahitra iray nipetraka teo alohan’ny nipoiran’ny mpiara-miasa iray nitondra basy, ka nitifitra ilay olon-dratsy.
Ny lehiben'ny hetsika miaraka amin'ny polisin'i Norvezy, Torgeir Brenden, dia nilaza fa efa nivonona hanindrona olon-kafa ilay lehilahy rehefa nandona azy ny fiaran'ny polisy. “Saika hanafika olona teny an-dalambe izy no tonga ny polisy ka nanakana izany”, hoy i Brenden.
“Olona roa no voarohirohy, ary nikarakara azy ireo araka izay azony natao ny polisy”, hoy ny lehiben’ny polisy tsy nanome fanazavana. Raha ny fantatra dia manamboninahitra iray no naratra saingy tsy dia mafy loatra. Nilaza i Brenden fa tsy nisy olon-kafa naratra fa nampiany hoe “azontsika eritreretina fa nikasa ny hanafika bebe kokoa izy.”
Nohamafisin’ny polisy fa tokony ho tamin’ny 9 ora maraina tany an-toerana no nisehoan’ity tranga ity tao amin’ny faritr’i Bislett Oslo. Tsy voamarina ny toe-pahasalaman'ilay voarohirohy na dia misy aza ny tatitra milaza fa maty teo an-toerana izy.
Araka ny fampitam-baovao norveziana, voaheloka tamin’ny volana desambra 2020 ho nanao fanafihana antsy miboridana indray ilay jiolahy tamin’ny 4 jona 2019. Taitra noho ny basy nataon’ny polisy ilay mpanafika, izay voalaza fa niantsoantso hoe ‘Allahu akbar’ nandritra ny fanafihana tamin’ny taona 2019. Voaheloka hitsabo tena sy handoa onitra izy. Lehibe tao amin'ny repoblika atsimon'i Rosia, Chechnya, ilay lehilahy.
Ny fanafihana dia tonga taorian'ny tranga iray tany Cannes, Frantsa ny alatsinainy teo, rehefa nanokatra ny varavaran’ny fiaran’ny polisy ny lehilahy iray nirongo antsy ary nanafika ny iray tamin’ireo polisy telo tao anatiny. Ilay antsy, izay voalaza fa nilaza zavatra momba ny “mpaminany”, dia notifirin’ny iray tamin’ireo manamboninahitra hafa. Mpitandro filaminana iray no naratra.
Tamin'ny volana oktobra, nisy Silamo niova fo nahafaty olona dimy tamin'ny fifandonana tamin'ny tsipìka sy zana-tsipìka tao amin'ny tanànan'i Kongsberg any Norvezy.